Mihevitra ny Hamerina ny Fihetsiketsehana Goavana Tamin’ny Herintaona Noho ny Fanovàna ny Fanabeazana, Ireo Kroaty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jona 2017 1:02 GMT
Ampahan'ny hetsika 1 Jona 2016 tany Zagreb, Kroasia. Sary: Nina Đurđević / hrvatskamozebolje.org, navoaka tamim-pahazoan-dàlana.
Ny 1 Jona 2016, nidina an-dàlambe tany Zagreb ireo Kroaty 50.000 isa, nitaky ny fanovàna ny fanabeazana, teo ambany teny filamatra hoe “afaka manao tsaratsara kokoa i Kroasia.”
Tamin'ny fitsingerenana voalohan'ny taonan'ny fihetsiketsehana, milaza ireo mpikarakaa fa hamerina hanainga ireo olona indray izy ireo mba hangataka fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana. Hampitambatra fikambanana samihafa, sendikà, mpampianatra, ary olona hafa liana amin'ny fampiakarana ny kalitaon'ny fanabeazana, maherin'ny 250 isa ilay finiavana.
Tamin'ny taon-dasa, niezaka ny nampihena ny maha zava-dehibe ilay fihetsiketsehana ireo manampahefana, nolazain'ny Minisitry ny Fanabeazana tamin'izany, Predraga Šustar, hoe “fety”. Tsy nahita io fanamarihany io ho mampihomehy ireo mpanao hetsi-panoherana. Mivaky toy izao ny famaritana ny hetsika Facebook ho an'ny fitsingerenan'ny taonan'ny hetsi-panoherana:
Tsy “fety” iny, tsy “fiandrasaina fiaran-dalamby” ihany koa. Fanagatahana ho an'ny fanovàna ny fanabeazana iny. Na iza na iza mihevitra mihoatra noho ny efa-taona dia mahafantatra tsara fa tsy maha faty antoka ny mampiasa vola amin'ny fampianarana. Mamolavola olona manisy fiovana, manomboka raharaham-barotra, manamboatra fiarahamonina demokratika mifototra amin'ny firaisankina, ny Fanabeazana tsara kalitao.
Midika ho fahaverezana tsy hoe herintaona fotsiny, fa taranaka rehetra anà mpianatra vavy sy lahy mihitsy, ny fandavana ny hanatanterahana ny fangatahana ny fanovàna ny fanabeazana mifototra amin'ny fahaizana.
Mampiasa ny tenifototra #jerHrvatska (“satria Kroasia”) ireo mpandray anjara, #HrvatskaMozeBolje (“afaka manao tsaratsara kokoa i Kroasia”), ary #HrvatskaMoraBolje (“tokony hanao tsaratsara kokoa i Kroasia”).
Nanatsara zavatra teo amin'ny fiarahamonim-pirenena Kroaty ilay hetsi-panoherana ny taona 2016. Nanamarika izao ilay mpanao gazety, Mirna Zidarić, talohan'ny taom-baovao:
Toa izao ny fomba hitenenana ny hoe #CroatiaCanDoBetter (afaka manao tsaratsara kokoa i Kroasia) amin'ny baiko moana. Iny ny hetsika lehibe indrindra tamin'ny taona 2016, satria #CroatiaMustDoBetter (Tokony hanao tsaratsara kokoa i Kroasia).
Natonton'ireo mpikarakara tamin'ny vatsim-pianarana azon'ny mpianatra iray, izay sady rainà ankizy kely koa, Leonarda Špiranec, ny ambin'ny vola voahangona izay tsy lany tamin'ny hetsi-panoherana 2016. Teo aloha, namoaka tatitra ara-bola amin'ny antsipirihany tamin'ny fandaniana izy ireo.
Hatao ny 1 Jona eo amin'ny kianja lehibe indrindran'i Zagreb ny hetsi-panoherana manaraka, ary ho tafiditra amin'izany ny diabe makany amin'ny fiantsoanan'ny fiarandalamby. Ny hampahatsiahy ireo manampahefana mikasika ny fangatahan'ny hetsik'izy ireo ny tanjona. Milaza ireo mpikarakara fa rehefa miresaka ny politikan'ny fanabeazana any Kroasia, mahazo vahana sy mandresy hatrany ireo tombontsoa ara-politika sy manokana manoloana ireo tolo-kevitra mahatsara zavatra apetrak'ireo mpanabe, ary ny vokatr'izany, mbola hiaina fahaverezana manampahaizana betsaka ihany i Kroasia.
Namerina ny foto-kevitry ny nodimbiasany ny Minisitry ny Fanabeazana ankehitriny, Pavo Barišić, tamin'ny fanamarihana fa tsy hetsi-panoherana io hetsi-panoherana io ; sady nitsikera ireo olom-pirenena.
Tsy ho lazaiko hoe hetsi-panoherana io. Hitako ho zavatra fanampiny manentana antsika tsirairay hahatanteraka ny fanovàna io, hitondran'ny tsirairay ny anjarany amin'ny lalany manokana avy.
Tafiditra amin'ny resaka fisandohana asan'olona i Barišić ankehitriny, izay efa nanintony ireo Kroaty hanara-maso bebe kokoa.
Bitsika: Eh, jereo ny zavatra ataon'i Barišić: mandrara ny fitifirana ireo vahoaka noho ny fisandohana ny lalàna vaovao momba ny siansa. #becauseCroatia (satria Kroasia)
Rohy: Manamboatra ny lalàna momba ny siansa i Barišić, sahala amin'ny hoe afaka manaisotra ny anaram-boninahitra PhD ireo Alemà
Mampifanohitra ny fihetsiky ny manampahefana Alemà ilay lahatsoratra mifandray amin'ilay bitsika esty ambony, ireo manampahefana izay nanao zavatra haingana tamin'ny fisamborana ireo mpisandoka tratra avy tao amin'ny biraom-panjakana, ary ireo zavatra nataon'ireo manampahefana Kroaty, izay tsy nanao afa-tsy ny “tombontsoan'ireo mpanapa-kevitra ambony maro”